umbuzo Convair 580 FSX
iinyanga 11 4 kwiiveki ezidlulileyo #993 by sruble
Ndandisanda kukukhuphela i-580 fsx. Ingxaki kum akukho-vc okanye iphaneli ye-2d nonke. Naluphi na uncedo oluya kuluxabisa kakhulu. Enkosi
iinyanga 11 4 kwiiveki ezidlulileyo - iinyanga 11 4 kwiiveki ezidlulileyo #994 by DRCW
Sawubona, Nguwuphi udidi lwe-FSX osebenzayo? Ibhokisi okanye i-Steam? Ngaba usebenza kwi-DX10 yangaphambili? Ukuba usebenzisa i-boxed version ye-FSX, ngaba i-Deluxe? Ukuba kunjalo uyilanda i-SP1 ne-SP2?
Ndisebenzisa umshicileli wegolide weFSX Boxed ozayo ngokukhawuleza, (SP1 & SP2). Ndayilanda le moya ngaphandle kwenxaki. NdineVC esebenzayo ngokupheleleyo. Ayikho ipakethi ye-flight ye-2D kule modeli. Umdali wasebenzisa iigraji ezabelwanayo ukusuka kwezinye iinqwelo-moya ezingapheliyo ngaphakathi kwe-FSX .. Uya kuqaphela kwisihloko (SP2 FSX) Ngaphandle kweSP1 kunye ne-SP2 efakwe, le moya ayiyi kusebenza. Ukukhuphela iipakethe zeplyawaysimulation ezingentla, kwaye kufuneka ube ne-aircraft yokusebenza. Masinwabe!
Uhlobo lokugqibela: Iinyanga ze-11 iiveki ze-4 ezedlule DRCW.
iinyanga 11 3 kwiiveki ezidlulileyo #1004 by sruble
Ndiza kuqhuba u-Steam, ndayikhupha kwakhona ndiyifake kwakhona isebenza kakuhle kwaye i-vc. Enkosi
iinyanga 11 3 kwiiveki ezidlulileyo #1005 by DRCW
Uyavuya ukuva ukuba isebenza .. Ukuba usebenzisa ii-Windows 10, khangela i-intanethi kuyo yonke into eyaziwayo nge-FSX. Happyingsings
Ixesha ukwenza page: 0.188 imizuzwana